Ny rohy amin'ny fampahalalam-baovao dia mampiroborobo ny vahaolana IP 100G amin'ny sehatra lehibe NAB New York - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Ny rohy amin'ny fampahalalam-baovao dia mampiroborobo ny vahaolana 100G IP amin'ny sehatra lehibe NAB New York
Ny rohy amin'ny fampahalalam-baovao dia mampiroborobo ny vahaolana 100G IP amin'ny sehatra lehibe NAB New York
Al Nuñez dia mpandahateny nasongadina tamin'ny fihaonambem-be an'ny federasiona SVG TranSPORT
Media Links®, mpamokatra sy mpisava lalana ao amin'ny Media over teknolojia fitaterana IP, dia hiseho mandritra ny fampisehoana NAB NY, Oktobra 16-17, 2019 amin'ny Booth No. N626. Hamahana ny fepetra ilaina amin'ny orinasam-pifandraisan'ny Broadcasters ny orinasa hampiditra ireo fangatahana bandwidth avo lenta sy serivisy mora kokoa manerana ny tambajotran'ny IP.
Talohan'ny hetsika NAB NY dia hiteny i Al Nuñez, SVP Sales - amerikanina & EMEA ho an'ny Media Links ao amin'ny Conference Video TranSPORT Conference izay atao any NYC amin'ny Oktobra 15th. Namboarin'i Adam Whitlock miaraka amin'ny ESPN, i Al dia hiaraka amin'ny mpikabary amin'ny resaka ho an'ny fifanakalozan-kevitra momba ny Public vs. tsy miankina: The State of IP Contribution and Production-based-Production.
Mandritra ity panelana ity, ny matihanina amin'ny indostria dia hifanakalo hevitra momba ny fitomboan'ny fahatokisan'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny Internet an-tserasera sy ny tsy miankina, ary koa ny fampidirana ireo codecs amin'ny ho avy, dia mampanantena fa ny IP no fomba vaovao ho an'ny rojo fandefasana fampielezana. Mifandraika mivantana amin'ny kianjan'ny NAB NY Media Links, izay hanehoan'ny orinasa ny vahaolana amin'ny tambajotra IP farany misy farany hamahana ny LAN LAN misy ny tamba-jotra ary koa ny tamba-jotra midadasika.
Ny vahaolana amin'ny haitao an'ny Media Links dia mampiditra ny lafiny sy ny fototra ary ny fanaraha-maso ireo singa izay natao manokana hanohanana ireo fenitra mifandraika amin'ny asa, manome ny tetezana avy amin'ny SDI mankany amin'ny tontolo IP ao anaty fandefasana, fampitam-baovao ary fialamboly fotodrafitrasa. Manome lalana fifindra-monina ny orinasam-pifandraisana sy ny mpamatsy tambajotra mba hanaterana serivisy vaovao toa ny 4K UHD sy ny famokarana lavitra ary koa ny fanohanana ny serivisy fitaterana an-tserasera 100 Gbps.
Eny an-tànan'i Jakoba Javits Centre any NYC, portfolio -n'ny haitao Media Links manaraka no hasongadina ny:
Andian-doka mifamadika MDX100G vaovao, izay miorina amin'ny fitaovana COTS talantalana, nohatsarana miaraka amina haino aman-jery Media Links mifantoka amin'ireo zavatra takiana tsy manam-paharoa sy mitaky amin'ny indostrian'ny media / broadcast.
MDP3000 andian-dahatsoratra ho an'ny IP Media Gateways, manome vidéo, audio ary fitaterana data mankany / avy amin'ny sisin'ny tambajotra IP, ary manohana ny SMPTE ST2110, 4K UHD ary koa ny famerenan'ny TICO, JPEG-ULL ary JPEG-XS.
ProMD-EMS (Enhanced Management Software), na manomana ny hetsika tambajotra rehetra ao anatin'izany ny fahatokisana ny serivisy, ny fanomezana, ny fandaharam-potoana, ny fitantanana ny fampisehoana / fanairana.
Lahatsoratra farany avy amin'ny DM (jereo rehetra)
Nanaraka ny LYNX Technik Inc. i Abner Figuereo ho VP Business Development - Novambra 19, 2019
Ny rohy amin'ny fampahalalam-baovao dia mampiroborobo ny vahaolana 100G IP amin'ny sehatra lehibe NAB New York - Oktobra 8, 2019
HDR Evie + LYNX Technik Debut ao amin'ny IBC 2019 - Septambra 9, 2019
Adam Whitlock Al Nunez fampitana injeniera fampitana Engineering fandraisana anjara ESPN Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Media Links NAB NY SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows SVG fitaterana Ultra HD Forum Video injeniera Video over IP	2019-10-08
Next: Videographer / Mpanamboatra mpamorona